11 Al-Shabaab ahaa oo lagu dilay duleedka Ceelbuur. - Wargeyska Faafiye
Ciidamada huwanta ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa sheegay inay dileen 11 qof oo ka tirsanaa Al-Shabaab oo weerar gaadmo ah ku soo qaaday ciidamada oo ku sugnaa waqooyiga degmadda Ceelbuur ee gobolka Galgaduud.
Guddoomiye ku-xigeenka gobolka Galgaduud Cabdixakiim Cabdullaahi Warsame oo waraysi siiyay Bar-kulan ayaa u xaqiijiyay in aysan jirin wax khasaare ah oo soo gaaray ciidamada huwanta ah oo ku sugan inta u dhaxaysa tuulooyinka Ceel-qooxle iyo Ceel Maxamuud oo hoos taga Ceelbuur.
Cabdixakiim ayaa sheegay in ay ciidamadu ku sii jeedaan degmada Ceelbuur oo la sheegay inay isaga baxday Al-Shabaab.
Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa dhowaan la wareegay degmooyin iyo deegaanno muhiim ah oo ay Al-Shabaab uga sugneyd gobollada Hiiraan, Bakool iyo Gedo.
Filed in: .Warka, Faafiye Latest news. Tags: 11 Al-Shabaab ahaa oo lagu dilay duleedka Ceelbuur.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsCIA-da “oo Basaastay” Congress-ka.Somali Teen who fatally stabbed St. Paul man to be freed at 21; deportation possible.Hub lagu qabtay Masjid ku yaala Muqdisho.Mo Farah becomes father to twin girls.Dimasho iyo Daawac ka Dhacay Ceelaha Biyaha.